Yintoni iFomramid Newswriting Format?
Indlela yokusebenzisa iPiramidi engaphenduliweyo kwi-Newswriting
Iipiramidi ezingaphendulwanga zibhekiselele kwisakhiwo okanye imodeli esetyenziswa ngokubanzi kwiindaba ezinzima. Kuthetha ukuba ulwazi olubaluleke kakhulu, okanye olugqithiseleyo luya phezulu kwebali, ngelixa inkcazelo encinci ebalulekileyo ihamba ngezantsi.
Nasi umzekelo: Wasebenzisa isakhiwo sepiramidi esitshintshileyo ukubhala ibali lakhe leendaba.
Ifomatidi engaphenduliweyo yasungulwa ngexesha leMfazwe yombutho . Iintetho ezigubungela iimfazwe ezinkulu zelo mfazwe ziya kwenza ingxelo yazo, zize zihambele kwiofisi ye-telegraph esondeleyo ukuba idibaniswe ngamabali abo, nge- Code Morse , ibuyele kwiindawo zabo zeendaba.
Kodwa ii-telegraph imigca yayidla ngokukhawulwa phakathi kwesivakalisi, ngamanye amaxesha kwisenzo sokuxhatshazwa. Ngoko abaphengululi baqaphela ukuba kufuneka babeke iibakala ezibalulekileyo ngokuqala kwamabali abo ukuze nangona ubuninzi beenkcukacha zilahlekile, ingongoma ephambili iya kufikelela.
(Okuthakazelisayo, i- Associated Press , eyaziwa ngokusetyenziswa kwayo ngokubanzi kwimbali ephepheni, ebhaliweyo , i-pyramid, yasungulwa ngelo xesha.Namhlanje i-AP iyona indala kunye enye yezona nkampani ezinkulu zeendaba kwihlabathi.)
Kakade ke, kwiminyaka engama-150 emva kokuphela kweMfazwe Yomphakathi, ifomathi ye-pyramid ephazamisiweyo isasetyenziswa ngenxa yokuba iyenze iincwadi zombini kunye neencwadi zabafundi kakuhle. Abafundi banenzuzo ngokukwazi ukufumana ingongoma ephambili yebali kweli sigwebo sokuqala. Kwaye iintengiso zifumana inzuzo ngokukwazi ukuhambisa ulwazi olungakumbi kwiindawo ezincinci, into enokwenene kwixesha apho amaphephandaba ehla ngokwenene.
(Abahleli nabo bathanda ifomathi yepiramidi engaphenduliweyo kuba xa isebenza kwixesha elide, libenza bakwazi ukunciphisa amabali amade angaphezulu ngaphandle kokulahlekelwa nayiphi na ingcaciso ebalulekileyo.)
Enyanisweni, ifomethi yepiramidi engapheliyo ingakumbi kunamhlanje namhlanje kunanini ngaphambili. Izifundo ziye zafumanisa ukuba abafundi bavame ukuba nengcaciso emfutshane xa befunda kwizikrini ngokuchasene nephepha.
Kwaye kuba abafundi bebaninzi bafumana iindaba zabo kungekudala kwizikrini ezincinane ze-iPads kodwa kwizikrini ezincinci zee-smartphones, kunanini ngaphambili abavakalisi kufuneka batshwankathele amabali ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza kunokwenzeka.
Enyanisweni, nangona iindawo zeendaba ze-intanethi kuphela zineenkcukacha ezingapheliyo zendawo, kuba kungabikho maphepha angaphrinta ngokomzimba, ngokuphindaphindiweyo kunokuba ungafumani ukuba amabali abo asebenzisa iipiramidi ezingenayo kwaye zibhaliwe kakhulu, ngenxa yezizathu ezikhankanywe ngasentla.
Ukuqala kwentatheli, ifomathi ephihliweyo kufuneka ifumaneke lula ukufunda. Qinisekisa ukuba ufumana iingongoma eziphambili zebali lakho - i-W ezinhlanu kunye ne-H - kwindawo yakho. Emva koko, njengoko uhamba ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni ibali lakho, faka iindaba ezibaluleke kunabo bonke phezulu, kunye nezinto ezincinci ezibalulekileyo ngasezantsi.
Yenza loo nto, kwaye uza kuvelisa ibali elibhaliweyo elibhaliweyo, elibhalwa kakuhle usebenzisa ifomathi eye yamelana nokuvavanywa kwexesha.
Indlela Yokugwema Ukutshisa i-Lede yeendaba zakho zeendaba
Imfihlelo yokubhala iiNtloko eziNtloko zeendaba zakho zeendaba
Gwema iimpazamo eziqhelekileyo eziqala kubaPhathi bamaphepha
Konke Okufuneka Ukwazi Ukubhala Izinto Zeendaba
Umehluko phakathi koLuntu noLuntu
Ngaba ufuna i-Bachelor's Degree ukufumana i-Jobnalism Job?
I-Turabian Style Guide ngeemizekelo
Igalofu kwi-Woods: Iikholeji zeParkland
IsiFrentshi kubaQaleli: Izifundo kunye namacebiso
Uxolelo: Lijongene njani ne-Conservatism ne-Immigration?
Ikholeji yeSt. Joseph Admissions
Yiyiphi eyona nto ibaluleke kakhulu: Iqhwithela, iTornado, okanye iSiphepho?
Intshayelelo kunye nePhambili
Ukudala iiFom kwi-Microsoft Access 2013
Iimpawu zeeGeorgia O'Keeffe Paintings
Fumana iNani elincinci elincinci okanye elithandathu elikhulu kunazo zonke kwi-Excel
IMITHETHO YEMIBUZO YEBHAYIBHILE, IMIBUZO YOKUBHALA, NOKUPHAKATHI
Ngaba Uburhulumente Bobugqwetha Kunobungqineli?
Ukuvakalisa ukungaqiniseki ngesiJapane
Izinto Ezilishumi Okumele Uzazi Xa Uqokelela I-Autographs Yeposi